“အသစ်သော” တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ် | The "New" New Baptist Tabernacle! | Real Conversion
ဇူလိုင်လ( ၂ )ရက်၊ သခင်ဘုရားနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်း သက်တော်မူပါစေသော။ ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေသော။” ( ဟေရှာယ ၆၄း ၁ )
ဘုရားသခင်ဆင်းသက်တော်မူသောအခါ “တောင်တို့သည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီး ကျလျက်ရှိသည်။” မယုံကြည်မှုတောင်တန်းများသည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီးကျလျက်ရှိ သည်။ သံသယတောင်များတို့သည် မျက်မှောက်တော်တွင် လဲပြိုကြသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်း တောင်တန်းတို့သည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီးမျှောကြသည်။ မာန်မာနတောင်တန်းများသည် မျက်မှောက်တော်တွင် ငုတ်လျှိုးကြသည်။ စိတ်ပျက်ခြင်းတောင်တန်းများသည် မျက်မှောက် တော်တွင် လဲပြိုကြသည်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်သောတောင်တန်းများသည် မျက်မှောက်တော် တွင်ငုတ်လျှိုးကြသည်။ စာတန် ၏ဖိနှိပ်ခြင်း တောင်တန်းများသည် မျက်မှောက်တော်တွင် တိမ် ကောသွားကြသည်။ ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သောတောင်တန်းများအားလုံးသည် ဘုရား သခင်ဆင်းသက်လာသောနိုးထမှုအချိန်အခါသမယတွင် တိမ်ကောငုတ်လျှိုးသွားကြသည်။ “ (မီးတော်ပြိုဆင်းသွားသကဲ့သို့) ထိုတောင်များသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင် စီးဆင်းသွားကြပေလိမ့်မည်။” စစ်မှန်သောနိုးထမှုဆုတောင်းခြင်းဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်အားစွဲကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယာ ကုပ်ကဲ့သို့ပင် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ခရစ်တော်နှင့်နပန်းလုံးနေရမည်။ ယာကုပ်က “ငါ့ကို ကောင်း ကြီးမပေးလျှင် သွားခွင့်မပြု” ဟု ဆိုလေသည်။ (ကမ္ဘာဦး ၃၂း ၂၆) ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က နိုးထမှုရှိသောဆုတောင်းခြင်းသည် “ဘုရားသခင်အားစွဲကိုင်ခြင်း၊ တောင်းလျှောက်ခြင်း၊ အကြောင်းစုံတင်ပြခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းခြင်း အမှန်တကယ်စတင်သည့်အဆင့် မျိုးတွင် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်သာဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်” ဟုဆိုသည်။ (Lloyd-Jones, နိုးထမှု၊ စာ-၃၀၅)
သို့ရာတွင် နိုးထမှုရှိသောဆုတောင်းခြင်းသည် ဟေရှာယကဲ့သို့သောလူများထံက လည်းကောင်း၊ “ကျွန်ုပ် ဒီမှာရှိပါ၏” ဟုဆိုသောသူများထံက ရောက်လာရမည်ဖြစ်သည်။ (ဟေရှာယ ၆း ၈) ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်အတွက် မိမိအသက်တာကို ဆက်ကပ်လိုသော သူများထံက ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒေါက်တာ A. W. Tozer က ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် အသက်ရှင်စွာနေထိုင်ရန်ဆိုလျှင် လူတို့ ကို တဖန်ပိုင်ဆိုင်ထားရမည်။ ကောင်းသောလူများပင်ဖြစ်ပါသည်။ မပြောရဲမဆိုရဲသူကို ဝိုင်းပယ်သူများဖြစ်ရမည်။ပရောဖက်၊ မာတုရ များကိုရှာဖွေသောသူဖြစ်ရမည်။သူသည် သတ္တိရှိသောသူ၊ ဘုရား သခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေသူဖြစ်ရမည်။၎င်းတို့၏ဆုတောင်းခြင်း နှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် နှစ်ပေါင်းများ စွာကြာမြင့်သောနိုးထမှုအတွက် စေလွှတ်တော်မူလိမ့်မည်။” ( ဒေါက်တာ A. W. Tozer, ဘုရားလူကို အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါ သည်။ )
ဤအချိန်နာရီတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်လိုအပ်သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ “ဘုရား သခင်၏လူ၊ သတ္တိရှိသောသူ” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလောက၏မတည်မြဲသောအရာကို မြင်တွေ့ သောသူဖြစ်ရမည်။ လုံခြုံမှုထက် ဆက်ကပ်မှုကိုလိုလာသောသူဖြစ်ရမည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ သောသူဖြစ်ရမည်။ ပရောဖက်ပြောဆိုသကဲ့သို့ “ကျွန်ုပ်ရှိပါ၏၊ စေလွှတ်မူပါ” ( ဟေရှာယ ၆း ၈ ) ဟု ပြောဆိုရဲသောသူများဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဆုတောင်းပဌနာပြုသောသူ များကို အလိုရှိပါ၏။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက် တော်မူပါစေသော။ ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေ သော။မီးသည် အမှိုက်ကိုလောင်သကဲ့သို့၎င်း၊ ရေကိုဆူစေသကဲ့ သို့၎င်းဖြစ်ပါစေသော။ သို့ဖြစ်လျှင်၊ ကိုယ်တော်၏ရန်သူတို့သည် နာမတော်ကိုသ၍ ၊ ရှေ့တော်၌ လူအမျိုးမျိုးတို့သည် တုန်လှုပ်ကြ ပါလိမ့်မည်။ ” ( ဟေရှာယ ၆၄း ၁-၂ )
လူငယ်များ၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ တန်ခိုးဖြင့် ထ၍ ဆုတောင်းပဌနာပြုကြကုန်အံ့။ လူငယ်များ၊ သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စည်းစိမ်၊ နှင့်အသက်တာများကို သားတော်ယေရှုခရစ်အ တွက် ပေးကမ်း၍ ဆက်ကပ်ကြပါစို့။ ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုးခွန်အားအားဖြင့် မာရ်နတ်စာတန် ကို တိုက်ခိုက်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်တွင် နိုးထမှုတန်ခိုးများရောက်လာစေရန် ဆုတောင်းကြပါစို့။ ဘုန်းရောင်ခြည်အတွက် ဆုတောင်းကြပါစို့။ “တက်ကြွခရစ်ယာန်စစ်သည်” ကို သီဆိုကြပါစို့။ သီချင်းစာရွက်ထဲတွင် နံပါတ် ၁ ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆို ကြပါစို့။
တက်ကြ၊ ခရစ်ယာန်စစ်သည် တိုက်ဖို့ချီသည်နည်း၊
ယေရှုကားတိုင်ထမ်း၍၊ ရှေ့တက်၊ စိတ်အားကြီး။
( “ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီကျူး” Sabine Baring-Gould, ၁၈၃၄-၁၉၂၄ ).
လူငယ်တို့၊ ကျွန်ုပ်လည်း လူငယ်ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ယခုတွင် အို မင်းလာပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအ သင်းတော်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ကြသည်။ အသင်းတော်၏အကွဲအပြဲတွင် နှစ် ပေါင်းများစွာ ပူပင်သောကရောက်ခဲ့သည်။ အချိန်ကို ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ငွေ၊ နှင့်လူငယ်ဘဝကို နှစ် ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ကြသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဖြစ်စေခဲ့ကြသည်။ အတော် အသင့်ကောင်းမွန်ခဲ့ကြသည်။ အဖိုးအခကိုလည်း ပေးဆပ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအသင်းတော်အား ဖြင့်ကမ္ဘာ့သာသနာကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာမကြာတော့ပါ။ ဤအသင်းတော်ကို နောက်တဆင့်အထိ သယ်ပိုးနိုင်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ မကြာတော့ပါ။ အင် အားလည်းမရှိတော့ပါ။ ဤအသင်းတော်ကို ရှေ့အဆင့်သို့ရောက်အောင် မပို့ဆောင်နိုင်တော့ ပါ။ အသင်းတော် ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူငယ်ဘဝကို ပေးဆပ်ခဲ့ကြပြီးပြီ။ သို့ရာတွင် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ်၏ “အသစ်” သောအရာကိုတော့ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ ပါ။ သင်တို့ လူငယ်များ၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ပြီးမြောက်အောင်မြင်မည်မ ဟုတ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ကြပါ။ လုပ်ဆောင်ကြပါ။ လုပ်ဆောင်ကြပါ။
ကျွန်ုပ်သည် တချိန်က စိတ်အားထက်သန်သော လူငယ်သင်းအုပ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်လျှင် သုံးကြိမ်ထက်မနည်း တရားဒေသနာဟောနိုင်သည်။ တချိန်တည်း တွင် လူပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်၊ သုံးပုံတစ်ပုံမှာ အလည်အပတ်လာရောက်သူများထံ တရားဟော ပြောနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အခုတွင် အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော်၊ ကင်ဆာရောဂါစွဲကပ်သူ ဖြစ်လာလေပြီ။ ယခုတွင် အသက်ကြီးလာကြလေပြီ။ ဆုတောင်းပြီးနှုတ်ကပါတ်တော်ဆင်ခြင် အောက်မေ့နှလုံးသွင်းလာပြီးနောက် နောက်ထပ်မစောင့်နိုင်သည်ကို သိရကြသည်။ လူငယ် လူရွယ်များကို ပြောင်းလဲစေသည့်ခေါင်းဆောင်မှုအလုပ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အားကူညီရန်နှင့်လမ်းပြကူညီရန်အတွက် အချိန်ရှိနေစဉ်အတွင်း၌ သင့်အား ကူညီမစရန် အချိန်ရှိသေးသည်။ နောက်နှစ်ဆောင်းရာသီဆိုလျှင် အမှုတော်မြတ်၌ ကျွန်ုပ်ပါဝင်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ တရားဟောသူအနည်းစုမှာ အသက်ခြောက် ဆယ်နောက်ပိုင်းတွင် သင်းအုပ်အနေဖြင့် ရှိနေသူ နည်းလှသည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်ခြင်းထက် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းလှမ်းပြီး လမ်းပြရန် ကျွန်ုပ်အတွက် အချိန်ရှိလျက်နေသေး သည်။ ထို့နောက် ကျွန်ု္ပ်တို့၏အသင်းတော်သည် John Samuel Cagan ကို အမှုတော်တွင် ပါ ဝင်ရန် အသင်းတော်က လက်တင်ပေးသင့်ပါသည်ဟု ယူဆပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူသည် အသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဖြစ်သင့်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်သည် နောက်ပြန်ဆုပ်၍ သူ၏ လမ်းပြဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင် Noah Song သည်လည်း လိုင်စင်ရ အမှုတော်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သင့်ပါသည်။ Aaron Yancy, Jack Ngann, Abel Prudhomme နှင့် Kyu Dong Lee တို့သည်လည်း ဤအသင်းတော်၏ သင်းထောက်အဖြစ် လက်တင်ရရှိသင့်သောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ Aaron Yancy သည် “သင်းထောက်ခေါင်းဆောင်” ဟူသောခေါင်းစဉ်နှင့် ထိုက်တန်သူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စနစ်သစ်ကို အသုံးချကြသည်။ ကောင်းသောလူစု ကို ရှာဖွေကာ အသင်းတော်တွင် “တက်ကြွသောသင်းထောက်များ” ကို ခန့်အပ်ထားပါသည်။ ယခုတွင် အချိန်ခဏတာကို လက်တွေ့အသုံးချပြီး အသင်းတော်ရှိလူငယ်များကို ယခု လက် ဆင့်ကမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ်၏ “သစ်လွင်သော ” သူများဖြစ်လာကြပါသည်။ တက်ကြွခရစ်ယာန်စစ်သည် ကို သီဆိုကြပါစို့။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ် ပြီး ဒုတိယစာပိုဒ်နှင့်ထပ်ဆိုကို သီဆိုကြပါစို့။
နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်အတွေ့အကြုံအားဖြင့် သိရှိရပါသည်။ သင်တို့၏နုပျိုမှု တစ်ခုတည်းဖြင့် ရပ်တည်၍ မရနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းဝိညာဉ်သွန်းလောင်ခြင်း အား ဖြင့် လန်းဆန်းတက်ကြွမှုရှိရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် အဘယ်ရာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ် သည် တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် သင်းအုပ်အလုပ်လုပ်ဆောင်သည်မှာ နှစ်ဆယ့်လေး နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Lin သည် ဆုတောင်းအားကြီးသော သင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ် ပါသည်။ ဒေါက်တာ Lin က “ဆုတောင်းခြင်း၏ပန်းတိုင်မှာ မျက်မှောက်တော်ကို ရရှိရန်ဖြစ် သည်” ဟုဆိုပါသည်။ သူက “နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်အသင်းတော်များတွင် ကြီးထွားလိုစိတ် ရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ရှိရမည်” ဟုဆိုပါသည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက် တော်မပါဘဲ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဟူသမျှသည် အချည်းနှီးသက်သက်သာဖြစ်မည်။ အောင် မြင်မှုလုံးဝရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားမျက်မှောက်တော်တန်ခိုးမရှိပါဘဲ ကြီးထွားမှု လုံးဝမရှိနိုင်ကြောင်းကို စာတန်က လုံးဝသိသည်။ ဒေါက်တာ Lin က ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော် ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနီးကပ်လာလေလေ၊ “ဆုတောင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သော စာတန်၏လှည့်ဖြားခြင်းသည် ကြီးလာလေလေဖြစ်သည်” ဟုဆိုပါသည်။ ( ဒေါက်တာ Lin ၏ စာအုပ်များမှကောက်နှုတ်ချက်များ၊ အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်များ ) တမန်တော် ရှင်ပေါလုက “ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိအသွေးအသားဖြင့် တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ကြသည်မဟုတ်၊” စာတန်နှင့်နတ်ဆိုးတို့နှင့်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ကြသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ( ဧဖက် ၆း ၁၂ ) ကျွန်ုပ် တို့ မှောင်မိုက်တန်ခိုးနှင့်မည်သို့ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြမည်နည်း။ ရှင်ပေါလုက အဖြေပေး ထားပါသည်။ “ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဆုတောင်းပဌနာပြုလျက် တောင်းပန်လိုသောအရာကို တောင်းပန်ကြလော့” ( ဧဖက် ၆း ၁၈ ) ဟု ဆိုထားပါသည်။ လူတစ်ဦးက ဆုတောင်းပဌနာပြု သောအခါ ခေါင်းဆောင်ဆုတောင်းသကဲ့သို့ နားထောင်ရန် သင့်စိတ်ကို တွန်းအားပေးပါ။ ဆု တောင်းခံချက်တစ်ခုချင်းစီအဆုံးပိုင်းတွင် “အာမင်” ထူးလိုက်ပါ။ ထိုအရာက ခေါင်းဆောင်၏ ဆုတောင်းချက်ကို မိမိဆုတောင်းချက်ဖြစ်စေမည်။ ထိုအရာက ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းချက်သည် တန်ခိုးပါ၍ စာတန်ကို တွန်းလှန်နိုင်ပါမည်။ ဒုတိယစာပိုဒ်ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး ဆု တောင်းကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့အဓိကဆုတောင်းခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာစေရန် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား မျက်မှောက်တော်တွင် ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာခြင်းသည် ကြီး မားသော မဟာနိုးထမှုကိုဖြစ်စေပါသည်။
“ကိုယ်တော်သည် မိုဃ်းကောင်းကင်ကိုဖွင့်လှစ်၍၊ ဆင်းသက် တော်မူပါစေသော။ ရှေ့တော်၌တောင်တို့သည် လှုပ်ကြပါစေ သော။” ( ဟေရှာယ ၆၄း ၁ )
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင် ဆင်းသက်လာသောအခါ “တောင်တို့သည် မျက်မှောက်တော်တွင် ငုတ်လျှိုးကြပေမည်။” မယုံကြည်မှုတောင်များသည် မျက်မှောက်တော် တွင် လဲပြိုကြလိမ့်မည်။ သံသယတောင်များသည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီးမျှောကြလိမ့်မည်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတောင်များသည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီးဆင်းသွားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တစ်ဦးချင်းစီကို ကွဲပြားစေသောအရာများသည် စီးဆင်းသွားမည်။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးချစ်သော မေတ္တာသည် မျက်မှောက်တော်တွင် စီးဆင်းလာမည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်ကို ဆန့်ကျင် သောတောင်များသည် မီးတောင်ကဲ့သို့ စီးဆင်းလာမည်။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အလယ်တွင် နိုးထမှုနှင့်အတူ တန်ခိုးတော်ဖြင့်ဆင်းသက်လာစေရန် နေ့တိုင်း အသွန်ခွန်စိုက် ဆုတောင်းကြပါမည်အကြောင်း တိုက်တွန်းပါ၏။ နိုးထမှုဆုတောင်းခြင်းဟူ သည်မှာ ဘုရားသခင်ကို ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ယာကုပ်ကဲ့သို့ “ငါ့ကိုကောင်းကြီးမပေးလျှင် မလွှတ်” ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က နိုးထမှုရှိသောဆုတောင်းခြင်းသည် “ဘုရားသခင်အားစွဲကိုင်ခြင်း၊ တောင်းလျှောက်ခြင်း၊ အကြောင်းစုံတင်ပြခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းခြင်း အမှန်တကယ်စတင်သည့်အဆင့် မျိုးတွင် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးရောက်ရှိသည့် အချိန်တွင်သာဖြစ်ကြောင်းဆိုသည်” ဟုဆိုသည်။ (Lloyd-Jones, နိုးထမှု၊ စာ-၃၀၅ )
သင်တို့တွင် အချို့တို့သည် နိုးထမှုအတွက် ဆုတောင်းရန် မလိုအားကြပေ။ သင်တို့ တွင် အချို့တို့က “နိုးထမှုကို ထိရုံသက်သက်” ထိသည်ဟုသာ ဆိုရပါမည်။ သင်တို့သည် အမှား ကိုပြုခြင်းသာဖြစ်သည်။ John သည တံခါးနှင့်ရင်ဆိုင်တတ်ေ အသစ်သော သင်းအုပ် ပင်ဖြစ်။ စုံလင်သောသူဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ခြင်းခံဖူးသောသူများထက် များပြားပြီး သုံးကြိမ်ထက်မ က ခံကြသည်။ ထိုသို့သော ပြောင်းလဲသူအသစ်များသည် အဘယ်အရပ်က လာကြပါသနည်း။ သူတို့သည် လွန်ခဲ့သောနွေရာသီက ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူခဲ့သော သေးငယ်သည့် “တို့ ထိခြင်း” မှလာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့လာရာအရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယသီချင်း စာပိုဒ်ကို သီဆိုကြပါစို့။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်သီဆိုကြပါစို့။
လွန်ခဲ့သောညက နိုးထမှုအစီအစဉ် အဆုံးသတ်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးထမှု ကို “မြည်းစမ်း” ရုံသက်သက်သာဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဤနှစ်တွင် ဝိညာဉ် တော်သွန်းလောင်းခြင်းကို တွေ့ရလိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်ကို နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်သောအတွေ့အကြုံအားဖြင့် သိရပါသည်။ သင်သည် နိုးထမှုအစစ်အမှန်ကို အမှန်တကယ်တွေ့ကြုံရလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် အမှန်တကယ် ဖြစ်ခဲ့သောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့် သက်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ပထမအ ချက်နေဖြင့် တွေ့ထိရမည်။
ဒုတိယအနေဖြင့်၊ ဆေးကြောသောအရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင် နိုးထမှုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင် သည်ကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ ဤလူငယ်များကို ခေါင်းဆောင်နေရာတွင် ထားရုံသက်သက်သည် အသင်းတော်ကို ခွန်အားမပြည့်၀စေနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော် ကျွန်ုပ်တို့အလယ် တွင်ရှိနေရန် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းမရှိပါက တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သစ်၏ “အသစ် သောအရာ” ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါ။
သီချင်းနံပါတ် ၃၊ Paul Rader ၁၈၇၉-၁၉၃၈ ရေးသားသည့် “ရှေးဟောင်းတန်ခိုး” ကို သီဆိုကြ ပါစို့။
ချစ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်ကိုးစား၊ အသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးဝယ်သူ၊
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကျွန်ုပ်တို့အား လှုပ်ရှားစေတော်မူပါ။
ကတိထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်အလယ်တွင် ကျိန်းဝပ်တည်နေပါ။
( “ရှေးဟောင်းတန်ခိုးတော်” Paul Rader, ၁၈၇၉-၁၉၃၈ ).
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ယေရှုခရစ်သည် သင့်အပြစ်အတွက် အဖိုးအခကိုပေးရန် လက်ဝါး ကပ်တိုင်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်သည် သင့်အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ကားတိုင်တွင် အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ယခု တွင် ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိပြီး သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုနေသည်။ အားကိုးယုံကြည်ပါ။ အားကိုးယုံကြည်ပါ။ ယခု အားကိုးယုံကြည်ပါ။ သူသည် သင့်အား ကယ်တင်တော်မူမည်။ သင့် ကို ကယ်တင်မူမည်။ ယခုသင့်ကို ကယ်တင်မူမည်။
အပြစ်ရှိသောသူသည် ယေရှုထံသို့ ဖာရိရှဲရှိမုန်ပေတရုအိမ်သို့လာခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်း စာက ဤသို့ဆိုပါသည်။
“ထိုသို့စားပွဲ၌လျောင်းတော်မူသည်ကို ထိုမြို့၌ ဆိုးသောမိန်းမတ ယောက်သည်သိလျှင်၊ ဆီမွှေးကျောက်ဖြူခွက်တလုံးကိုယူခဲ့၍၊ နောက်တော်၌ခြေတော်အနီးမှာ ရပ်လျက်ငိုကြွေး၍ ခြေတော်ပေါ် သို့မျက်ရည်ကျလျှင် မိမိဆံပင်နှင့်သုတ်လေ၏။ ခြေတော်ကိုလည်း နမ်း၍ ဆီမွှေးနှင့်လိမ်းလျက်နေလေ၏။” ( လုကာ ၇း ၃၇-၃၈ )
ဤအမျိုးသမီးသည် မြို့တွင် အပြစ်လုပ်သောသူအဖြစ် လူသိများသည်။ သူသည် အပြစ်ကြီး သူဟု လူသိများသည်။ သူသည် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသူဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ယေရှု စားသောက်သည့်နေရာသို့သွားပြီး ယေရှု၏ခြေကို ဆီလိမ်းပြီး ပွေ့ဖက်နမ်းသည်။ သူမသည် ယေရှုထံသို့ လာခဲ့သည်။
“ထိုမိန်းမအားလည်း၊ သင်သည် အပြစ်တို့နှင့်လွတ်လေပြီဟု မိန့် တော်မူ၏။စားပွဲ၌ လျောင်းသောသူတို့က၊ အပြစ်ကိုလွှတ်တေသာ ဤသူကား အဘယ်သူနည်းဟု အောက်မေ့ကြ၏။ ယေရှုသည် ထိုမိန်းမအား သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်ကို ကယ်တင်ပြီ။ ငြိမ် ဝပ်စွာသွားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ( လုကာ ၇း ၄၈- ၅၀ )
သူမသည် အပြစ်ပြုလုပ်သောသူဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူမသည် ယေရှုထံသို့ ဖြစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့်လာခဲ့သည်။ သူမသည် ယေရှုထံသို့လာ၍ ယေရှုကို ဖက်နမ်းသည်။ သူမအား ယေရှုမိန့်မှာသည်မှာ “သင့်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ သူလုပ်ဆောင်သမျှသည် ယေရှုထံသို့လာရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် လုံလောက်သောအမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူမအပြစ် ကို လွှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သွားသည်။
ကယ်တင်ခြင်းရရန် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သူမလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ဖြစ် သည်။ သူမသည် ယေရှုထံလာရုံသက်သက်ဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ ယေရှုက သူမ အား ဤသို့ဆိုသည်။
“ငါ့ထံသို့လာကြလော့၊ …… ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။” ( မဿဲ ၁၁း ၂၈ )
ယေရှုထံတော်ပါးသို့ ယခုလာလျှင် သင့်အပြစ်အလုံးစုံကို လွှတ်တော်မူပြီး သင့်ဝိညာဉ် ကို ကယ်တင်လိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာခေတ်က လူတို့ကို ကယ်တင်သည့်နည်းတူ သင့်အား ကယ်တင်တော်မူမည်။ သူ့ထံသို့လာလျှင် သူသည် သင့်ကို ကယ်တင်တော်မူမည်။ သင့်အပြစ် အလုံးစုံတို့ကို ကာရနီတွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောပေးမည်။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဖြင့် သင့်အား ရစ်ပတ်မူမည်။ သင့်ကို ကယ်တင်တော်မူမည်။ သင်လုပ် ဆောင်ရမည့်အရာမှာ သူ့ထံသို့လာရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ယခုအသက်ရှင်လျက် ဘုရား သခင်၏လက်ယာတော်အရပ်တွင် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထိုင်နေတော်မူသည်။ သူ့ထံသို့လာမည် လော။ ခေတ်ဟောင်းတေးသီချင်းတစ်ပုဒ်က ဤသို့ဆိုပါသည်။
ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊ ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာသည်။
ယေရှု၊ အထံတော်သို့ ကျွန်ုပ်လာသည်။
(“ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာသည်။” William T. Sleeper, ၁၈၁၉-၁၉၀၄ ).
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Noah Song က ကျမ်းစာဖတ်ကြားသည်။ ဟေရှာယ ၆၄း ၁-၄
“ကိုယ်တော်၊ လက်တော်ကိုဆန့်သန်းပါ"၊ (Albert Midlane, ၁၈၂၅- ၁၉၀၉ ရေးစပ်သည်။ )